Ithegi: ukuthengisa kwe-b2b | Martech Zone
Ithegi: ukuthengisa kwe-b2b
I-LinkedIn iguqule indlela amashishini adibana ngayo. Yenza okuninzi kweli qonga ngokusebenzisa isixhobo sayo sokuThengisa iNavy. Amashishini namhlanje, nokuba makhulu okanye mancinci kangakanani, axhomekeke kwi-LinkedIn yokuqesha abantu kwihlabathi liphela. Ngabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-720, eli qonga likhula mihla le ngobukhulu kunye nexabiso. Ngaphandle kokugaya, i-LinkedIn ngoku yeyona nto iphambili kubathengisi abanqwenela ukunyusa umdlalo wabo wentengiso yedijithali. Ukuqala ngo
Iingcebiso eziPhezulu zokuThengisa ngokuQeqesha iTrafikhi engakumbi kunye nokuzibandakanya
NgoMvulo, Septemba 24, 2018 NgoMvulo, Septemba 24, 2018 Douglas Karr
Kule veki ndibuyile eofisini ndisuka kuthetha eSioux Falls kwiConcept ONE Expo. Ndenze intetho ephambili malunga nendlela iinkampani ezinokuphinda ziyisebenzise ngayo inkqubo yazo yentengiso yedijithali yokonga ixesha, ukugcina izixhobo, ukuphucula amava e-omni-channel yedijithali, kwaye ekugqibeleni-kuqhuba iziphumo zeshishini. Ezinye zeengcebiso zazinxamnye ne-intuitive kumgangatho woshishino kunye nezenzo ezilungileyo. Nangona kunjalo, olo yayiloluhlobo lwenqaku lamagama am aphambili… umxholo omangalisayo awuhlali usenzeka
Njengoko siqhubeka nodliwanondlebe neenkokheli zentengiso, uphando kwiindlela ezikwi-Intanethi, kwaye sibona iziphumo zamalinge ethu okunceda abathengi bethu, akukho mathandabuzo kumandla wentengiso yomxholo kwimizamo yokufumana ye-B2B. Amashishini aphanda ukuthengwa kwawo okulandelayo kwi-Intanethi kunakuqala. Ingxaki, nangona kunjalo, kukuba iinkampani zivelisa umxholo ongasebenzi kakuhle. Xa abathengisi be-B2B abaphumeleleyo babuzwa isizathu sokuba kutheni ukuthengisa umxholo wabo kusebenza, i-85% yafumana amanqaku aphezulu, afanelekileyo